I-Apple isusa i-iPod Nano kunye ne-iPod Shuffle kwiivenkile zayo ezikwi-Intanethi | IPhone iindaba
UJordi Gimenez | | iPod
Oku singatsho ukuba yayisisiphelo esichaziweyo kwaye kudala oko ezi iPod bezingafumani hlaziyo. Kucacile ukuba ucinga ukuba ezi khompyuter zinokuba yindawo yokungena kubasebenzisi abaninzi abafuna ukumamela umculo, kodwa nge-iPod Touch kuya kufuneka bahlale ukuba bafuna ukuthenga i-iPod namhlanje.
Los Ipod nano y I-iPod Shuffle isuswe yi-Apple kwaye abalindelwanga ukuba baphinde bavele nanini na. Xa ufikelela kwiwebhusayithi ye-Apple kwi-Intanethi kwicandelo loMculo lalo naliphi na ilizwe, kuphela ithuba lokuthenga i-iPod Touch.
Ngale ngqiqo, kubonakala kuyinto eqhelekileyo kuthi emva kokuba ne-iPod Shuffle evenkileni ukusukela ngo-2010 kunye ne-iPod Nano ukusukela ngo-Okthobha ka-2012. Kuya kufuneka ukuba umamele umculo wakho, ke ibiyinto ekufuneka yenzekile kwaye UApple wayefuna ukuba olo suku lube namhlanje.
Ke esona sizathu siphambili sokuba ezi zixhobo ziye esiphelweni ngokucacileyo kukuthengisa. Kwiminyaka yakutshanje, ukuthengisa bekungalunganga kwaye esi sisizathu esaneleyo sokuba iApple ibashiye bekhathalogu yemveliso. I-iPod Nano iyaqhayisa Weather 7 izizukulwana zeekhompyuter kunye nemodeli yePod Shuffle 4, kulo mzuzwana uhlaziyo luyekile ukwenziwa ngaphambili kwimodeli yeNano esele yongeze isikrini esincinci.
I-iPod Touch ibambe isibonda
Okwangoku kuphela kusindisiwe Imodeli efana kakhulu ne-iPhone, imodeli leyo Iqala ngexabiso lama-euro angama-229 kwimodeli engama-32GB kunye nee-euro ezingama-339 kwimodeli ye-128GB. Le iPod Touch inentengiso ethe kratya kuneShuffle kunye neNano ngenxa yesayizi yesikrini sayo esine-intshi ezine, i-chip ye-A4 enyusa i-iPhone 6 kunye nekhamera esemva kwe-8 MP. Ngokwenyani, uhlaziyo lokugqibela lwale modeli ye-iPod lufana kakhulu ne-iPhone, imihla ukusuka kunyaka ka-2015 ngenxa yoko asijonganga nemodeli ehlaziyiweyo kutshanje kodwa siqinisekile ukuba iya kuhlala kwikhathalogu iminyaka embalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iPod » I-Apple isusa i-iPod Nano kunye ne-iPod Shuffle kwiivenkile zayo ezikwi-Intanethi
Ukunikezelwa kwe-iPhone 8 ekhangeleka inomtsalane